कर्णाली प्रदेशमा साढे ६ हजार जनताको भागमा एक डाक्टर ! « प्रशासन
कर्णाली प्रदेशमा साढे ६ हजार जनताको भागमा एक डाक्टर !
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १० हजार जनसंख्यालाई कम्तीमा तीनजना चिकित्सक चाहिन्छ । यो मापदण्डअनुसार १७ लाख ७१ हजार ६४० जनसख्ंयाका लागि ५१८ जना चिकित्सक आवश्यक पर्छ । तर, अहिले मापदण्डभन्दा २५४ चिकित्सक कम छन् । हालै सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य चौकी ३३६, प्रसूति केन्द्र २७४ र एम्बुलेन्स ३२ वटा छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।